HAMMEENYAA FI SHIRA DIINAA , DANTAA OFIITTI GEEDDARUUN ABSHAALUMMAADHAA!! – OROMIYAANWANOFITIABBAATUUEGATA.ORG
SEENAA Y.G (2005) Har’aa bakka kaleessaa hin jirru . amana dheeraa deemneerra. Wareegama ulfaataa itti kafalaa jirra. Addatti dhalooti har’aa gootummaa addaan ummata isaa kabachiisaa jiraa. Qa…
Source: HAMMEENYAA FI SHIRA DIINAA , DANTAA OFIITTI GEEDDARUUN ABSHAALUMMAADHAA!!